Ahoana ny Fandefasana Sary ao Amin’ny Internet? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndau Norvezianina Nzema Ossète Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà
Any am-panaovana vakansy ianao, dia tsara be ilay izy! Tianao hotantaraina amin’ny namanao ilay izy. Inona àry no hataonao?
A) Handefasanao taratasy na karta paostaly ny namanao tsirairay.
B) Handefasanao e-mail ny namanao rehetra.
D) Handefasanao sary ao amin’ny Internet izy ireo.
Tamin’ny dadanareo sy mamanareo mbola tanora mitovitovy taona aminao, dia mety ho tsy nisy safidy afa-tsy ilay “A.”
Taona vitsivitsy lasa izay, dia mety ho nifidy an’ilay “B” ianao.
Amin’izao anefa dia aleon’ny tanora maro ilay “D”, raha mahazo mandefa sary ao amin’ny Internet izy. Hoatr’izany koa ve ianao? Hanampy anao tsy ho hahita loza amin’izany àry ity lahatsoratra ity.
Inona ny maha tsara azy?
Inona ny maha ratsy azy?
Eo no ho eo ilay izy. “Raha ohatra hoe tsara be ny dianay, na mahafinaritra be ny fiarahako amin’ny namako, dia faly be aho dia tonga dia halefako ny sariko.”—Melanie.
Mora atao ilay izy. “Mora kokoa amiko ny mijery sary nalefan’ny namako vao haingana, toy izay hikarokaroka ao amin’ny e-mail mba hahitana hoe nanao ahoana ry zareo.”—Jordan.
Afaka mifandray amin’ny namanao sy havanao foana ianao. “Lavitra be no misy ny fianakaviako sy ny namako sasany. Raha mandefa sary matetika ao amin’ny Internet ry zareo, sady izaho koa matetika mijery an’ireny sary ireny, dia hoatran’ny hoe mahita an-dry zareo isan’andro ihany aho!”—Karen.
Mety hahita loza ianao. Raha ohatra ny fakantsarinao ka misy programa mampahafantatra ny toerana misy anao, dia mety ho tsy ampoizinao ny vokany. Hoy ny tranonkala Digital Trends: “Raha alefanao ao amin’ny Internet ny sarinao misy fanazavana momba ny toerana misy anao, dia ho mora fantatry ny olona ratsy saina ny misy anao, raha ohatra ka manana programa afaka mikarokaroka izy.”
Tian’ny olon-dratsy sasany kosa ny mahafantatra hoe tsy ao an-trano ianao. Nanao tatitra ny Digital Trends fa nisy olona telo namaky trano 18, satria tsy nisy olona tao amin’ireo trano ireo. Ahoana no nahafantaran’izy ireo an’izany? Narahiny tao amin’ny Internet hoe mankaiza sy mankaiza ireo olona mipetraka ao amin’ireo trano ireo. Nitentina 100 000 dolara mahery ny vidin’ny entana nangalarin’ireo mpamaky trano.
Mety hahita zavatra mamoafady ianao. Tsy mahamenatra ny olona sasany ny mandefa an’izao sary tsy misy dikany rehetra izao mba ho hitan’ny olona rehetra. Hoy ny tovovavy atao hoe Sarah: “Hahita zavatra tsy tokony ho hitanao ianao raha mijery ny kaontin’ny olona tsy fantatrao. Hoatran’ny hoe mandeha ao amin’ny tanàna iray tsy fantatrao ianao, nefa tsy manana sarintany. Azo antoka fa ho tonga any amin’ny toerana tsy tianao haleha akory ianao.”
Ho lany fotoana ianao. Hoy ny tovovavy atao hoe Yolanda: “Vetivety ianao dia ho variana mijery ny sary sy fanazavana farany nalefan’izao olona rehetra izao. Dia lasa mijery telefaonina foana ianao mba hahitana hoe inona ny vaovao farany.”
Mila mahay mifehy tena ianao, raha tia mandefa sary ao amin’ny Internet
Hoy ny ankizivavy atao hoe Samantha: “Tsy maintsy ferako ny fotoana ijereko Internet. Tena mila mahay mifehy tena ianao, raha manana kaonty.”
Aoka ianao tapa-kevitra ny tsy hijery zavatra mamoafady. Hoy ny Baiboly: “Tsy hamela zava-poana ho eo anoloan’ny masoko aho.”—Salamo 101:3.
“Jereko matetika ny kaontin’ireo namako, dia esoriko tsy ho namako izay hitako hoe mandefa sary tsy mendrika.”—Steven.
Aza minamana amin’ny olona tsy manaraka ny fitsipika arahinao, sao ho voataonany ianao. Hoy ny Baiboly: “Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Ny naman-dratsy dia manimba ny fahazarana mahasoa.”—1 Korintianina 15:33.
“Aza mijery sary malaza be ao amin’ny tranonkala fifaneraserana, satria fotsiny hoe be mpijery ireny. Matetika amin’ireny no ahitanao teny ratsy, olona miboridana, ary zavatra ratsy hafa.”—Jessica.
Fero ny fotoana hijerenao Internet sy ny fotoana handefasanao sary ao. Hoy ny Baiboly: “Mitandrema tsara hatrany mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty tsara ny fotoana.”—Efesianina 5:15, 16.
“Esoriko tsy ho namako ny olona mandefa sary be loatra. Mankeny amoron-dranomasina izy, ohatra, dia maka sary akorandriaka iray, nefa sary 20 amin’ilay izy no alefany. Inona koa no dikan’izany? Lany fotoana fotsiny aho mijery an’ireny sary rehetra ireny.”—Rebekah.
Fidio tsara ny sary alefanao mba tsy hahatonga ny hafa hieritreritra hoe tsy mahalala afa-tsy ny tenanao ianao. Hoy i Paoly, mpanoratra Baiboly: “Izao no lazaiko amin’ny olona rehetra eo aminareo: Aza mihevi-tena mihoatra noho izay tokony hoheverina.” (Romanina 12:3) Aza mieritreritra hoe hahaliana ny namanao foana ny sary rehetra momba anao sy momba izay ataonao.
“Misy olona mandefa tsy an-kijanona ny sariny. Raha mpinamana izahay, dia fantatro hoe manao ahoana ny paoziny, fa tsy ilainy ny mandefa amiko ny sariny isaky ny iray minitra!”—Allison.
“Tsy avelako hoe izao olona rehetra izao dia afaka mijery ny kaontiko daholo. Izay olona fantatro tsara ihany no ataoko namana, sy izay olona tsy mampaninona ahy rehefa miresaka aminy mivantana aho.”—Cheyenne.
“Alohan’ny handefasako sary, dia mieritreritra aho hoe: ‘Sao tsy mety ity sary ity fa mety hanafintohina olona? Sao hanenenako any aoriana any ny mandefa an’izy ity?’”—Eliana.
Fifandraisana Aman’olona Fiadanan-tsaina & Fahasambarana Manontany ny Tanora Tanora
Ahoana no ho Fahitan’ny Olona Anao Rehefa Mijery ny Sary Alefanao Izy Ireo?